Mheni Box Games, munhu pamusoro slots nzvimbo anotangazve mutsva vhidhiyo slots Panda Pow. slots Uyu shanu Gwenzi uye maviri namashanu mubhadharo misara mumwe. Zvinonzi inobva dingindira Chinese katuni 'Kung-fu bear'.The slots inopa rakasiyana bhonasi chinhu kuti anopa kusvika 20 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso vari pakutanga asi kuvapo kunenge rukungiso kuchiitwa zvinogona kutipa kusvika 40 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso inoita kunyange kupfuura mari. Mumwe anofanira kutsvaka nakisisa panda endarama Gwenzi izvo kuti zvinobva zvarongwa kuti takunda guru. Kana uchida vachiongorora kunze cheap car insurance itsva kubva pamusoro slots paIndaneti ipapo slots iyi zvirokwazvo mutengo sendi ose iwe bheji.
The akashinga, Kung-fu-rudo, cartoonish nebere anotora musimboti rwakazara muna Panda Pow inopiwa pamusoro slots nzvimbo 'Mheni Box Games'. In mutambo uyu, mumwe mutambi anogona kutamba shoma uwandu £ 0.25 paminiti kuruka uye kufadza uwandu £ 1000,00 paminiti kuruka. wo, munhu anogona kuchinja mari siyana kubva risingamboshandisi zvakawanda £ 0.30 mari por mutsetse kuti £ mari 100 paminiti mutsetse. It ane kudzokera mutambi chikamu 95-97%.
Chii Saka Unique?
Tinogara vane havi kuziva pamusoro ziso mazano ose Gwenzi yakataurwa pamusoro slots nzvimbo i.e Mheni Box Games. Dzavo itsva Video slots Panda Pow ndiye ichangobva kuwedzera pasi rino uye awana kuziva rakakura pakati playing vatambi. The Gwenzi vari kwazvo kuisa munzvimbo yakadzika dzvuku colour yakashongedzwa Chinese style achiita zvokutemera.
Vatambi vanofanira utsvake nemwenje, Fans uye egoridhe, sezvo mumwe nomumwe wavo anopa payouts nevarumbidzi kune Mari zana rimwe payline. zviratidzo zvose izvi kana akabatana ne Goldfish anogona kuwedzera winnings mazana maviri coins.The kupfuura huchikwezva chiratidzo kubva mwero zviratidzo mucheche Panda- patambo pamuti bazi. chiratidzo ichi inogona kuwana iwe 2, 5, 50, 125 kana 500 Mari kana mutambi anokwanisa kunyika imwe, piri, tatu, mana kana mashanu rimwe 25 kubhadhara akarongwa mutambo.
Panda uye Free Muruoko rwake anobata chirukiso
Mumwe ziso-ndibate chiratidzo mutambo uyu ndiwo Panda wechipiri- akapfeka dzvuku mucheka. It anoita sechikara uyewo paradzira chiratidzo uye rinogona kutsiva zvimwe zviratidzo zvose. Uyezve, rinogonawo kubatsira kuita Activate vakasununguka bhonasi chikabviswa. Zvinogona chete kunyika iri 3 pakati Gwenzi uye zvinogona kuumba richakunda mubatanidzwa nokuda takunda guru. Kumhara shanu kana kupfuura izvi zvinogona Activate vakasununguka bhonasi chikabviswa uye umo vatambi vari paakavapa sezvinotevera-
5 vakasununguka Tunoruka nokuti 5 Panda Anoparadzira.
8 vakasununguka Tunoruka nokuti 6 Panda Anoparadzira.
12 vakasununguka Tunoruka nokuti 7 Panda Anoparadzira.
15 vakasununguka Tunoruka nokuti 8 Panda Anoparadzira.
20 vakasununguka Tunoruka nokuti 9 Panda Anoparadzira.
wo, munhu anogona kuona nyore idzva ukapisa murwi chiratidzo – The Golden Panda inowedzerwa Gwenzi iri vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso. chiratidzo ichi rinowanika zvakazara zvinobva zvarongwa kana mutambi anorova pamusoro Gwenzi 2, 3, 4 uye 5. Uyezve, kuti vaumbe kuhwina mubatanidzwa, chiratidzo ichi unogona kutsiva zvimwe chiratidzo zvose kunze paradzira. Kumhara vakawanda vavo pamusoro chete kuruka, munhu anogona kuwana mubayiro guru.
Panda Pow ne pamusoro slots nzvimbo i.e Mheni Box Games hwagara huchizadzika zvomurayiro vanoda slots. With hunokosha bhonasi chikabviswa, mutambo uyu wava zvikuru muropa. It ane mwero makakava uye munhu anogona kutarisira kuwana vaifanira anosvika 500 × kuti danda rake. Mheni Box zvakajeka vaudzewo ave pamusoro slots nzvimbo kuburikidza nezvekutanga mutambo uyu inonakidza! Ongorora nayo yedu pachako!